Dugsiyada degmada St. Cloud 742 waa degmo u furan isdiiwaangalinta isla markakaana ku soo dhaweeynaya Iskuuladooda dhamman deegaanka iyo ardeyda aan degaanka ahayn. Hanoqoto qoys diiwaangalinayo ilma yar oo waqti dhow bilaabaya fasalka caruurta yar yar (Kindergartern), ama gabi ahaanba ku cusub aagga, ama haysta caruur galaysa fasalada 1-12, Xarunta soo dhawaynta ayaa waxay diyaar u tahay marwalbo ineey caawiso. Xarunta soo dhawaynta waxay kaa caawineysaa diiwaangelinta ardayda cusub waxaanad ka heli kartaa caawimaadyo, adeegyada iyo u gudbinta si loogu diyaariyo Iskuulka ilmahaaga. Xarunta soo dhawaynta waxay furantahay maalmaha kala ah: Isniinta ilaa Jimcaha laga bilaabo 7:30 ilaa 4:00 galabnimo (Eeg saacadaha wakhtiyada xagaaga ama samarka ay xarunta furantahay ee hoos ku xusan )
Booqo Xarunta Soo Dhawaynta oo Addreeskeedu yahay: Midtown Square Mall, 3333 Division St, Suite 216 St. Cloud (Waalid ama mas’uul waa inuu joogaa goobta )
Saacadahi Joogtada Ah
7 subaxnimo ilaa 4 galabnimo. Saacadaha Xagaaga (Summer):
Bisha Lixaad (June )19 –ka ilaa Todobaad (July 28-ka)
Saacadaha: 7:30 subaxnimo ilaa duhurkii ama ballan qabso
Kala xiriir numbarka ah: 320-257-3811 Fax: 320-257-3849
Kala xiriir Harunta soo Dhawaynta lambarka ah: 320-257-3811